Malunga nathi -Iintengiso zoKhuseleko zeLockey Co, Ltd.
Imveliso yokhuseleko yaseLockey Co., Ltd.
Ukutshixa ngaphandle kukhetho olwenzayo, ukhuseleko yindawo ekufikelelwa kuyo nguLockey.
Ukutshixwa ngumsebenzi wobomi bukaLockey, senza ukutshixela kuphela nangobungcali.
Sinesebe lethu le-R & D ukwenza zonke uyilo olwenziweyo.
Izisombululo zokhuseleko ziyaxhaswa ukuba awunalo nofifi lokuba ungayenza njani inkqubo yokutshixa ngaphandle.
Imveliso yokhuseleko sisiseko sokufezekisa ukusebenza kakuhle kwezoqoqosho kunye nophuhliso oluzinzileyo. Uninzi lweengozi emsebenzini zibangelwa kukuvuseleleka okungalindelekanga okanye ukuqala kokukhutshwa okungalawulwayo kwamandla ngelixa kusenziwa, kufakwa okanye kulungiswa.
ILockey ihlala ihambelana nefilosofi yokuba amandla onke ayingozi kufuneka atshixiwe. Ukukhusela ubomi babo bonke abasebenzi kwihlabathi liphela ngomgangatho waseTshayina kukusukela kukaLockey okungagungqiyo.
Imveliso yoKhuseleko lweLockey Co, Ltd isekwe ukuqinisekisa ukhuseleko emsebenzini. Sineqela lolawulo lodidi lokuqala kunye nee-serial zamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, kunye ne-ISO9001, i-OHSAS18001, i-ATEX, i-CE kunye ne-SGS eqinisekisiweyo, ukubonelela ngezisombululo zokhuselo koomatshini, ukutya, ulwakhiwo, ulungiselelo, imichiza, amandla nazo zonke ezinye izinto ezenziwayo. Uluhlu lwemveliso lugubungela ukuvalela ngaphandle kubandakanya ukhiye wokhuseleko, ukutshixelwa kwevalve, ukutshixeka kwentambo, iithegi zokutshixela, i-hasp yokutshixwa, isitishi sokutshixwa kolawulo njalo njalo, ngezabelo zentengiso ezinkulu kunye nolwamkelo kumazwe aphesheya nasekhaya.
ILockey lishishini langoku elidibanisa i-R & D, inkonzo yokuvelisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe, ukuba neqela lolawulo lokuqala kunye nenani lamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Sibeka unyawo kwimveliso yoomatshini, ukutya, ulwakhiwo, ulungiselelo, imveliso yamachiza, amandla kunye nezinye ukubonelela ngezisombululo kwiinkampani. Iimveliso zikaLockey zigubungela ukhuseleko ngaphandle kwezitshixo, ukhiye wevaluva, ihipp yokutshixela ngaphandle, ukuvala umbane, intambo yokutshixela ngaphandle, ibhokisi yokutshixela kwiqela, ikhithi yokutshixa kunye nesitishi, njl.
Imveliso yethu ihlangabezana neMigangatho efana ne-ISO9001, i-OSHA, i-OHSAS18001, i-ATEX, njl.